Ny solosaina finday mora indrindra - Manampy anao izahay hamonjy
Latsaky ny 500 €
Latsaky ny 1000 €
Lalao latsaky ny € 1000
Sanda tsara indrindra amin'ny vola
Inona no solosaina finday hovidiana?
Kitiho ny solosaina finday
Miaraka amin'ny SSD
Tsy misy rafitra miasa
Miaraka amin'ny Linux
kahie tena manify
Solosaina mora indrindra
Mampitaha sy manadihady ny solosaina finday mora vidy araka ny toetra manokana mba hahitanao ny tsara indrindra amin'ny kalitao sy ny vidiny.
Fifanarahana anio amin'ny solosaina finday mora
Ny fividianana ny iray amin'ireo solosaina finday mora vidy dia mitovy amin'ny fividianana fiara. Mila manao fikarohana ianao ary in-sivy amin'ny folo dia mila "mihodina" alohan'ny hanoloranao azy hody, satria mety tsy mety aminao ny mety amin'ny mpiara-monina aminao. Alohan'ny hieritreretana ny modely tianao, dia tokony handinika ny vidiny sy ny teti-bola anananao ianao..
Ho fanamaivanana anao, nanao ny ampahany sarotra indrindra amin'ny asa izahay, nanangona ato amin'ity lahatsoratra ity ny solosaina finday mora indrindra. Nampiditra modely ho an'ny filana rehetra izahay, ka na inona na inona hampiasanao azy dia azo antoka fa hahita modely mety aminao ianao.
Raha mbola tsy fantatrao izay solosaina finday mora vidy tianao, eto ambany ianao dia manana andian-dahatsoratra momba ny fividianana izay hanampy anao hisafidy mifototra amin'ireo endri-javatra tadiavinao:
Solosaina araka ny vidiny
Vidiny kalitao laptop tsara indrindra
Solosaina finday latsaky ny 1000 euros
Solosaina finday latsaky ny 500 euros
Laptops amin'ny processeur
Solosaina amin'ny karazana
4K solosaina finday
Linux laptop. Iza no hovidiana?
Solosaina misy SSD
Solosaina convertible 2-in-1
Solosaina finday gaming
Solosaina tsy misy rafitra fiasana
Solosaina amin'ny marika
Marika laptop tsara indrindra
TECLAST solosaina finday
Laptop laptop Xiaomi
Laptops araka ny efijery
Laptop 13 santimetatra
Laptop 14 santimetatra
Laptop 15 santimetatra
Laptop 17 santimetatra
Solosaina araka ny fampiasana tianao homena azy
Laptop ho an'ny famolavolana sary
Portable ho an'ny fanovana video
Portable ho an'ny ankizy
Portable ho an'ny fandaharana
Solosaina ho an'ny mpianatra
Miaraka amin'ny tetibola € 500 sy € 1.000, ity fampitahana ity dia hanampy anao hisafidy araka izay ilainao.
Raha tsy manana kilasy ianao hoe iza no hovidina dia efa nanamboatra anao izahay torolàlana feno afaka mifidy ianao laptop inona no hovidiana amin'ny fipihana ny rohy.
Ny solosaina finday mora indrindra amin'ny 2021
Eny ary, tsy misy ado intsony, andao hanomboka amin'ny solosaina finday mora indrindra amin'ny 2021. Mba hanaovana ny lisitra dia tsy ny vidiny ihany no noraisinay, fa koa ny famolavolana, ny fepetra ara-teknika sy lafiny maro hafa.
Jereo ny tolotra lehibe izay hitanay ambany kely satria ity modely ity dia tena mendrika hodinihina, noho izany antony izany no nametrahanay azy voalohany. Izy io dia kahie manify sy mangina. Izy io angamba no tsara indrindra ampiasaina ho solosaina finday faharoa na ho solosaina finday ho an'ny mpianatra sy matihanina. Mahazo izay aloanao ianao, noho izany dia tsara kokoa ny tsy manantena haingana na azo ampiasaina. Na izany aza, na dia eo aza ny solosaina finday mora indrindra amin'ity lisitra ity, dia misy endri-javatra mahavariana.
Ny tena mahavariana dia ny 64 GB, ity dia endri-javatra lehibe izay tsy ampy ny ankamaroan'ny solosaina izay nampidirinay tamin'ity lisitra ity. Tokony hieritreritra momba ny CHUWI HeroBook ianao tahaka ny valintenin'i Microsoft tamin'ny Chromebook. Raha tsy mifanaraka amin'ny rafitra fiasan'ny Chrome ianao ary zatra mampiasa Windows 10, dia ity no iray amin'ireo solosaina finday mora indrindra avy amin'ny Microsoft.
Ity solosaina ity mety tsara ho an'ny fampiasana maivana isan'andro: mandeha amin'ny Internet, mampiasa Microsoft Office (toy ny Word sy Excel), mifehy sy manavao ny tambajotra sosialy, mampiasa serivisy video streaming ...)
Iray amin'ireo solosaina finday mora indrindra amin'ity lisitra ity izy io, saingy tsy midika izany fa tsy matanjaka. Ho an'ny fampiasana isan'andro dia hanome anao a bateria maharitra ela, fanodinana haingana Ary afaka milalao jeux vidéo tsotra aza ianao (ho an'ireo sarotra kokoa dia latsaka kely fa raha mitady solosaina finday ho an'ny ankizy ianao dia safidy tsara ity, matokia ahy).
Raha ny traikefanay, Ny tena lesoka amin'ity solosaina finday ity dia ny tsy fisian'ny kapila DVD. Na izany aza, lasa mahazatra ny solosaina finday amin'ity sarany ity, koa aza avela hanakana anao izany, satria ny ankamaroan'ny rindrambaiko ilainao, toy ny Microsoft Office, dia azo vidiana ho fampidinana. , tsy misy kapila. Na izany aza, raha tena manelingelina anao izany, dia azonao atao ny misafidy ny hividy fiara DVD ivelany latsaky ny 30 euros.
Ankoatra izany, noho ny haben'ny efijery, ny kalitaony ary ireo toetra voalaza etsy ambony, ity dia solosaina finday tsara ho an'ny tetibola tery.
ASUS Vivobook 15,6 santimetatra HD
Ny Asus VivoBook dia mety iray amin'ireo solosaina finday mora indrindra ampiasaina andavanandro amin'ity lisitra ity. Lasa mpivarotra ambony indrindra amin'ny Amazon izy io, ary raha ampitahaina amin'ny solosaina finday hafa amin'ny vidin'ny vidiny, dia hitantsika mora ny antony.
Ny toetra izay nofintinintsika tao amin'ny lisitra teo aloha dia tena mahazatra ho an'ny solosaina finday rehetra, koa inona no mampiavaka azy? Eny, nisafidy ny hanolotra sanda tsy azo resena amin'ny vola sy fampisehoana HD miaraka i Asus Karatra sary Integrated Intel HD Graphics 620 ary v2 Dolby Advanced Audio mba ahafahanao mijery fahitalavitra na sarimihetsika miaraka amin'ny kalitao rehetra andrasanao.
Ity no karazana laptop izay azonao ampiasaina ho an'ny asa sy multimedia. Na dia tsy kely indrindra na portable indrindra aza izy io, dia mbola mora entina mivoaka isan-trano sy any ivelany mankany an-trano, miasa amin'ny Windows 10, mijery sarimihetsika sy fahitalavitra na milalao lalao video tsotra aza. Noho ny vidiny, dia manamafy aho fa izany no izy iray amin'ireo solosaina finday tsara indrindra amin'ny vidin'ny vidiny eny an-tsena.
Ity solosaina finday ity dia somary mora kokoa noho ireo hafa atolotra, saingy nanapa-kevitra ny hampiditra azy ihany izahay satria ao amin'ny torolàlana solosaina finday hafa dia nahatonga azy ho eo amin'ny toerana ambony, na dia ny laharana voalohany amin'ny lisitry ny PC Advisor amin'ny solosaina finday lafo indrindra amin'ny 2021 aza. Noho izany, mendrika ve ny mandoa izany vola fanampiny izany sa mendrika izany amin'ity modely ity?
Nampidirinay ny HP 14 ao amin'ny lisitry ny solosaina finday tsara indrindra amin'ny 2021 satria dia afaka maka izay rehetra atsipy azy (afa-tsy biriky) sy ny hafa kely.
Izy io dia manidina haingana amin'ny fampiharana asa fototra rehetra toy ny Microsoft Office, ny fitetezana tranonkala amin'ny ankapobeny, ny serivisy horonan-tsarimihetsika mivantana ary na dia mamela anao hilalao lalao video aza (na dia tsy tokony hohadinointsika aza fa tsy natao ho an'izany izy io, somary miadana ary ny sary dia manana kalitao antonony ambany).
Ho an'izany rehetra izany dia dinihintsika izany iray amin'ireo solosaina finday tsara indrindra amin'ny vidiny, satria afaka mahazo izany amin'ny latsaky ny 300 euros ianao.
Ny fisian'ny Lenovo Ideapad amin'ity lisitra ity dia somary hafahafa. Ity kahie ity dia manana a Ecran touchy LED rotary, HD feno (1920 x 1080). Midika izany fa azonao atao ny mametraka azy amin'ny fomba fijerena raha te hijery horonan-tsary YouTube na sarimihetsika ianao.
Ny iray ve manana ny processeur tsara indrindra amin'ny lisitra, ka azo antoka fa safidy tsara izany raha mitady fampisehoana tsara ianao ary mankafy solosaina finday 2-in-1 azo ovaina.
Ny Lenovo Yoga dia somary maivana kokoa noho ny solosaina finday hafa, saingy mbola tsy mifanandrify amin'ireo Chromebook izay jerentsika etsy ambany momba izany. Mahery kokoa noho ny solosaina finday izay nofaritanay tamin'ny andalana teo aloha izy io ary, na dia toa somary artifisialy aza ny efijery miforitra, dia voalaza fa miasa tsara izy io noho ny zava-misy. ho tactile. Amin'ny ankapobeny ity modely ity manana fampiasana mitovy amin'ny Packard Bell EasyNote, saingy manana endri-javatra tsara kokoa.
Ny solosaina finday mora indrindra araka ny fampiasany
Ho an'ny asa fototra:
15,6 "HD efijery 1366x768 piksel
AMD A6-9225 Processor, DualCore 2.6GHz hatramin'ny 3GHz, 1MB
GENERATION FAHAFITO INTEL CORE.I5 DUAL-CORE PROCESSOR
EKARENA RETINA MAZAVA
Ultra-maivana, milanja 1340 g fotsiny ary ny faharetan'ny batterie hatramin'ny 19.5 ora, ny LG grama no finday 17" malaza indrindra ...
Windows 10 Home Edition (64bit RS3) ho an'ny fampisehoana malefaka kokoa
Fahatsiarovana azo itarina, 512 GB SSD ho fenitra miaraka amin'ny slot fanampiny hanitatra hatramin'ny 2 TB; 8 GB RAM miaraka amin'ny ...
Efijery mikasika 12.3-inch (2736x1824 teboka)
Intel Core i5-1035G4 Processeur, 1.1GHz
2 amin'ny 1:
Efijery 14 ", FullHD 1920x1080 teboka IPS
AMD Ryzen 5 2500U Processor, Quadcore 2.5GHz hatramin'ny 3.4GHz
Tolo-kevitra alohan'ny hividianana
Aorian'ny torolàlana ankapobeny momba ny solosaina finday tsara indrindra dia mety ho liana amin'ny zavatra voafaritra kokoa ianao. Amin'ity tranga ity dia tsy mila manahy ianao, manana fampitahana maromaro izay hahaliana anao ihany koa.
Vidiny kalitao laptop tsara indrindra. Fampitahana somary feno kokoa mampitaha tsara kokoa ny kalitao sy ny vidin'ny modely sasany. Eritrereto raha te hahazo tombony betsaka amin'ny volanao ianao.
Solosaina finday gaming. Ho an'ireo mpampiasa izay te hividy solosaina finday hilalao lalao. Nametraka ny mpilalao ambony indrindra izahay amin'ny vidiny sy ny vidiny mba hahafahanao mahazo tombony betsaka amin'ny sary sy ny fampisehoana.
Marika laptop tsara indrindra. Ho hitanao fa ny marika rehetra tafiditra eto dia fantatra ary noho izany tsy sinoa izy ireo. Azonao atao ny mahita ny fampitahana feno raha toa ka mila fampahalalana tsara kokoa momba izany ianao. Manolotra vina feno momba ireo marika azonao itokisana izahay. Mitovy amin'izay ampitahaintsika amin'ny pejintsika izy ireo solosaina finday mora vidy.
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny Windows 10, ny solosaina finday dia miakatra indray. Saingy tsy io ihany no antony nahatonga an'io fahombiazana io, fa nisy fiantraikany tamin'ny fanamafisan'ny Ultrabooks sy ny fitomboan'ny hybrida roa-in-iray izay miasa ho solosaina finday sy tablette. Ny solosaina finday mora dia mahazo vahana amin'ny Chromebook noho ny modely toa ny HP Pavilion x2. Mandritra izany fotoana izany, ny solosaina finday manana hery ampy hilalao lalao dia mahita ihany koa ny fiantraikan'izy ireo ary toa ho lasa fanoloana tsara ho an'ny solosaina desktop-ntsika.
Miaraka amin'ny safidy maro azo ampiasaina, mihasarotra ny fisafidianana ny solosaina finday tsara indrindra ho an'ny filanaoIzany no antony maha-zava-dehibe ny hanapahanao hevitra, voalohany indrindra, izay hataonao amin'izany.
Raha te hifidy haingana sy mora ny solosaina finday mifanaraka amin'ny filanao ianao dia manoro hevitra izany izahay jereo ity pejy web ity.
Ireo mpampiasa izay mandeha aorian'ny fotoana fandefasana haingana sy solosaina maivana satria te-hifindra miaraka aminy dia azo antoka fa ho faly amin'ny Ultrabook.. Ny mpilalao kosa dia hisafidy ny solosaina finday mifanaraka amin'ny filàn'ny sary sy ny fanodinana azy, ary ireo izay mila fitaovana manome fahafaham-po, dia hisafidy hybrida roa amin'ny iray.
Amin'ny voalohany, mety ho toa be loatra izany - miaraka amin'ireo safidy rehetra ireo - saingy Ny tanjonay dia ny hanampy anao hahita ny solosaina finday tsara indrindra na inona na inona ilainao. Minoa anay rehefa milaza aminao izahay fa misy solosaina finday tonga lafatra ho anao. Miaraka amin'ity torolàlana ity dia tsy ho hitanao fotsiny izany, fa ho azonao antoka 100% ny fividiananao.
Fampitahana solosaina finday: vokatra farany
Ny fanombanana nataonay no nitarika anay hisafidy mpandresy telo tamin'ireo solosaina finday 10 nodinihinaIreo no modely telo ampidirintsika amin'ity fampitahana solosaina finday ity.
El voasokajy voalohany, mpandresy ny Loka volamena, dia ny HP Envy x360 de 13,3 santimetatra. Ity solosaina finday ity dia manana processeur Intel Core i7 matanjaka ary 256GB an'ny SSD - azo itarina hatramin'ny 512 GB -. Ankoatra izany, miasa miaraka amin'ny Windows 10 izy io, manana fizakan-tena hatramin'ny 9 ora sy 28 minitra ary milanja 1,3 kg monja.
Marina fa ny habe 13,3-inch dia tsy manana ny efijery lehibe indrindra eny an-tsena, fa mahafeno azy amin'ny fahafaha-mitondra azy. Ny HP Spectre x360 dia manana port USB 3.0 telo izay manome anao fidirana haingana amin'ny periferika USB rehetra. Ity solosaina finday ity dia mifanaraka amin'ny karatra SD sy HDMI. Ny mpanamboatra dia manolotra telefaona an-tserasera, chat ary serivisy ara-teknika, ary koa ny media sosialy.
El Second classified ary ny mpandresy ny Loka volafotsy dia ny andiany Dell Inspiron 5570 de 15 santimetatra. Tsara ny hafainganam-pandehan'ity kahie ity, 3,1Ghz, toy ny processeur fototra, Intel Core i3, manome valiny haingana ho anao. Ny tena mahasarika amin'ity solosaina finday ity dia ny ahafahanao manavao ny karatra grafika ho karatra video AMD raha toa ka mila miasa amin'ny sary avo lenta ianao. Ny fahafahany fitahirizana 1.000 GB amin'ny kapila mafy dia ampy ary manome toerana malalaka ho an'ny rakitra multimedia anao.
Ny rafitra fandidiana, Windows 10, dia miasa tsara. Manana bateria maharitra izy io izay mahatratra 5 ora sy 45 minitra, ny marina dia azo hatsaraina io lafiny io. Ny Inspiron 5570 dia somary mavesatra noho ny mpandresy, 2.2 kg, izany, amin'ny ampahany, dia noho ny efijery 15-inch. Tahaka ny HP Envy X360, rehefa nanao fitsapana hafanana ny Inspiron dia nahatratra 37.7 degre ny farany ambany izay, araka ny efa noresahinay, dia tsy mahazo aina raha mihazona azy eo am-pofoanao. Ny famahana ny efijery fototra dia 1920 x 1080 piksel, saingy azonao atao ny manavao azy amin'ny famaha avo kokoa, 3840 x 2160 - na inona izany, a Fampisehoana 4K. Izy io dia manana seranan-tsambo USB 3.0 roa ary seranan-tsambo USB 2.0 iray.
Farany, ny toerana fahatelo ary ny mpandresy ny Loka Bronze dia ny Acer Swift 5 de 14 santimetatra. Ity modely ity dia manana hafainganam-pandehan'ny processeur 3,4GHz, lehibe ho an'ny solosaina finday amin'ity sokajy ity. Miaraka amin'ny naoty A- amin'ny ankapobeny, ny angon-drakitra momba ny zava-bitanay dia mampiseho fa tsy ny processeur no mitazona ity PC ity amin'ny toerana fahatelo. Ny modely fototra dia manana SSD 256GB ary ny rafitra fiasany dia Windows 10.
7 ora sy 36 minitra ny salan'isan'ny batterie, izay ambany noho ny salan'isa ho an'ireo solosaina nodinihintsika. Ny famahana ny efijery fototra dia 1920 x 1080 piksel, saingy azo havaozina ho 2560 x 1440. Fanampin'izany, ny Acer Aspire Swift dia manana seranan-tsambo USB 3.0 roa ary seranan-tsambo USB 2.0 iray.
Ny fampitahana dia ny modely malaza indrindra, noho izany ny modely manodidina ny € 1.000. Raha manana teti-bola tery kokoa ianao dia jereo ny fampitahana anay solosaina finday tsara kalitao na ny antsika vidiny laptop hevitra mba hahitana ny mora indrindra.
Karazana solosaina finday
Mba hamaranana ny fampitahana amin'ny solosaina finday, dia holazainay hoe inona ireo karazana solosaina finday raha te hanitatra kely kokoa ny fizarana tsirairay satria manana lahatsoratra mifandraika izahay.
Toy ny amin'ny fividianana lehibe hafa rehetra, rehefa mieritreritra ny hahazo solosaina finday ianao mandra-pahatongan'ny isa euro farany. Izy io dia fitaovana haharitra taona vitsivitsy, noho izany dia manoro hevitra anao izahay hijery ny torolàlana momba ny solosaina finday tsara indrindra alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra.
Taona vitsy lasa izay dia tsy nisy afa-tsy solosaina finday hanantonana sy solosaina finday hiasa. Androany kosa, safidy maromaro ho an'ny sokajy tsirairay. Andeha isika hanomboka amin'ny fototra:
Amin'ny ankapobeny ireo solosaina finday ireo fitaovana izay tsy maintsy mahafeno ny toetra sasany thinness, maivana, hery sy ny habeny napetraky ny processeur Intel, amin'ny ezaka hanampiana ireo mpanamboatra solosaina Windows mahatoky izay mifaninana amin'ny Apple MacBook Air 13-inch.
Mba hamidy ny solosaina finday Ultrabook toy izany, dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra henjana napetraky ny Intel. Tsy maintsy manify izy io, tsy tokony ho matevina kokoa (rehefa mihidy) noho ny 20 mm ho an'ny efijery 13.3 santimetatra na 23 mm ho an'ny efijery 14 santimetatra na lehibe kokoa. Ho fanampin'izany, tokony hanana ora enina ny androm-batterany raha toa ka milalao horonan-tsary avo lenta ianao na sivy raha tsy miasa.
Topazo maso ny fampitahana ultrabooks mora izay ananantsika.
Tsy afaka mihoatra ny telo segondra vao mivoaka ny Ultrabook amin'ny hibernation. Ireo solosaina finday ireo amin'ny ankapobeny dia manana kapila mafy mafy sy endri-javatra toy ny baikon'ny feo sy efijery mikasika. Ny Ultrabooks dia novolavolaina miaraka amin'ny fahaiza-mitondra sy ny fampisehoana ao an-tsaina, saingy lafo kokoa ny vidiny, manomboka amin'ny $ 900.
Nisy ny vokany Ny solosaina finday avo lenta izay tsy misy fitsiriritana amin'ireo solosaina finday Apple tsara indrindra. Ultrabooks dia solosaina finday manodidina ny 2 santimetatra ny hateviny, manana fiainana bateria lava sy fampisehoana maranitra, toa ny Dell XPS 13 na ny Asus Zenbook.
Ny Lenovo Yoga (2021) dia tsy solosaina finday manify sy maivana fotsiny, fa dia revolisionera tanteraka eo amin'ny sehatry ny famolavolana. Ny fametrahana efijery 13,9-inch amin'ny frame 11-inch dia tsy asa kely, fa i Lenovo koa dia nanao fahagagana tamin'ny famoronana monitor tsy misy sisiny tsy misy fetra. Ny Yoga 910 koa dia solosaina finday tena matanjaka sy mikitoantoana miaraka amin'ny vidiny azo atolotra. Amin'izany rehetra izany dia heverintsika ho Ultrabook tsara indrindra izany.
Solosaina ho an'ny lalao
Ny solosaina finday no tena eritreretinao - PC ho an'ny tena mpankafy lalao video. Raha fintinina dia tsy zatra milalao Candy Crush na Angry Birds izy ireo, fa milalao lalao PC tena mavesatra izay mila processeur avo lenta, 8GB hatramin'ny 16GB RAM, fitahirizana 1 TB farafahakeliny ary karatra grafika. izay endri-javatra manan-danja indrindra. Ny solosaina finday ho an'ny filalaovana dia amin'ny ankapobeny dia efamira kokoa ary ny fanamboarana azy dia matanjaka kokoa noho ny solosaina finday hafa, ary matetika ny efijery dia avo lenta.
Azonao jerena ny anay famakafakana ny solosaina finday tsara indrindra.
Solosaina ho an'ny lalao tsy voatery ho manify na maivana, satria matetika ny mpilalao no mampiasa azy ireo fa tsy ny solosaina desktop. Ny solosaina finday iray dia ahafahanao milalao lalao mitovy amin'ny solosaina desktop, saingy miaraka amin'ny tombony dia azo entina izy io mba hifindra avy amin'ny efitrano iray mankany amin'ny iray hafa na hilalao amin'ny tranon'ny namana.
Tato ho ato, ny solosaina finday dia nanao fandrosoana tsy mampino amin'ny fiezahana hanatratra ny mpiara-miasa aminy desktop. Amin'io lafiny io, toa ny fanatsoahan-kevitra lojika indrindra amin'ity evolisiona ity dia ny fanombohana ny fampidirana ireo sombin-drakitra amin'ny solosaina finday. Ity modely ity dia a Solosaina 15,6-inch mahery vaika, miaraka amin'ny processeur desktop lehibe sy GPU finday ambony indrindra misy. Mety hieritreritra ianao fa ity fitambarana ity dia hahatonga solosaina finday lehibe, fa ity iray ity dia mahavita manangona azy rehetra ao anaty vatana kely.
Solosaina ho an'ny mpianatra sy ny asa
Ny solosaina finday fandraharahana dia mitovy amin'ny solosaina finday mahazatra mahazatra resahina ao amin'ny lahatsoratra hafa, saingy izy ireo naorina amin'ny kalitao avo kokoa, ny kojakojany dia maharitra kokoa ary amin'ny ankapobeny dia amidy miaraka amin'ny fiantohana lava kokoa sy feno kokoa. Tsy mila manolo ny solosaina findainao ho an'ny orinasa ianao isaky ny roa taona satria lany daty.
Amin'ity indray mitoraka ity dia manoro hevitra ny torolalana ho an'ny mpianatra kahie.
Ireo karazana solosaina finday ireo dia novolavolaina miaraka amin'ny zava-bitany ao an-tsaina, miaraka amin'ny processeur quad-core izay afaka mitantana mora foana ireo asa sarotra maro miaraka satria tokony ho afaka mampandeha ny rindrambaiko ilaina rehetra ianao mba hanatanterahana ny asanao, nefa tsy miadana ny solosaina. Amin'ny ankapobeny dia tsy manana karatra grafika lehibe ireo solosaina finday ireo, saingy azo ampiana izy ireo raha toa ka misy sary na fanovana video ny asanao.
Ny HP Pavilion 14-ce2014ns dia mety ho toy ny MacBook Air amin'ny lafiny maro, fa milina tsara kokoa amin'ny lafiny maro. Manify kokoa izy io, maivana kokoa ary manintona kokoa noho ny vatany aluminium. Ankoatra izany, ity laptop ity dia manana a Fampisehoana Full HD avo kokoa, CPU Intel Core i7 ary HDD fitahirizana 1TB ho safidy. Na izany aza, ny tena mahagaga dia azonao atao ny mahazo izany rehetra izany amin'ny manodidina ny 800 euros, izay mahatonga azy io ho iray amin'ny solosaina finday tsara indrindra raha manana teti-bolan'ny mpianatra ianao.
Saika natao manokana ho an'ny asa, noho izany ny anarany, Ireo kahie matevina amin'ny ankapobeny dia tsy misy afa-tsy zavatra iray ao an-tsaina: ny vokatra. Ny mpivarotra amin'ny ankapobeny dia mameno ireo singa ireo miaraka amin'ny GPU matihanina, toy ny andiany Nvidia Quadro na ny tsipika AMD FirePro.
Ny toetrany hafa dia a karazana seranana midadasika kokoa ary fidirana mora kokoa amin'ny anatiny noho ny solosaina finday hafa. Tsy lazaina intsony ny fampidirana lova bebe kokoa, toy ny cursors TrackPoint, ary ny safidy fiarovana amin'ny fitaovana, toy ny scanner amin'ny rantsantanana. Ho ohatra dia azontsika atao ny manonona ny Lenovo ThinkPad X1 Carbon sy ny HP ZBook 14.
Ny Lenovo Ideapad 330, noho ny hatsarany tsy misy dikany sy ny endrika mateza sy mafy orina, izany no zavatra rehetra ilainao amin'ny toeram-piasana finday. Fanampin'izay, manolotra famahana efijery lehibe ho an'ny matihanina, fiainana bateria maharitra ary fampisehoana matanjaka sy azo itokisana.
Raha jerena fa manomboka amin'ny 900 euros izany dia mendrika ny handoa izany fanampiny izany amin'ny zavatra rehetra atolony ho an'ireo matihanina miasa ivelan'ny birao.
Solosaina roa amin'ny iray (hybrids)
Raha anisan'ireo mampifangaro ny fampiasana ny solosaina finday sy ny an'ny tablette ianao dia azo inoana fa ny fitaovana hybrid no mety aminao. Nalefa tamin'ny rafitra fiasa roa ampiasaina, Windows 8 an'ny MicrosoftIreo fitaovana ireo dia mety amin'ny endrika tablette izay azo apetaka amin'ny kojakoja ho toy ny solosaina finday, na mety amin'ny endrika solosaina izay miendrika takelaka rehefa misaraka amin'ny fitendry. Hitanao eto ny fampitahantsika kahie convertible 2-in-1 raha liana amin'ireo modely ireo ianao.
Mazava ho azy, Ny hevitra dia ny hanome fitaovana iray izay afaka manompo amim-pahombiazana amin'ny maha-tablette azy na amin'ny solosaina finday, mba tsy hanana gadget be dia be ao an-trano. Ny fampidirana ireo fitaovana ireo eny an-tsena dia tsy mora, fa ny ohatra mamirapiratra indrindra amin'ny tanjaky ny Microsoft Surface Pro 3.
Ny HP Spectre x360 13 dia tsy vitan'ny fitaovana mahagaga sy be mpampiasa indrindra amin'ny marika HP hatramin'izao, fa ny solosaina finday hybrid mahasarika indrindra eny an-tsena. Taorian'ny fanatsarana an-taonany maro, ity takelaka hybrid vaovao avy amin'ny HP ity dia nandalo fanatsarana tena lehibe, toy ny efijery lehibe kokoa na fanapahan-kevitra avo kokoa. Ho fanampin'izany, misy singa kely novolavolaina, toy ny savily na ny karazana fonony, mba hahatonga ny HP Specter ho miorina sy mora kokoa amin'ny fampiasana.
Hahafantatra solosaina finday iray ianao raha vao hitanao: habe lehibe, jiro manjelanjelatra, sary hoso-doko, ary mpankafy mihodinkodina. NA Noho ny fisehoan'ny modely manify, maivana ary kanto kokoa, toa ny Razer Blade na ny MSI GS60 Ghost Pro, dia manomboka miova ity paradigma ity..
mifanety ity rohy Manana fampitahana feno ianao amin'ny solosaina finday hilalao (lalao).
Amin'ny ankapobeny, ny solosaina finday dia miaraka amin'ny GPU finday farany avy amin'ny Nvidia sy AMD mba hahafahanao milalao ny lalao farany ary koa raha milalao amin'ny solosaina desktop ianao (Misy modely afaka manolo mivantana ny solosaina desktop).
Solosaina amin'ny tanjona ankapobeny
Ity karazana solosaina farany ity dia sarotra ny manasokajy. Izy ireo dia milina izay mbola manaraka ny fenitra napetraka am-polony taona lasa izay tokony ho solosaina finday, na dia voadio kokoa aza. Raha jerena ny zava-drehetra nomen'ny tsenan'ny solosaina finday ho an'ny tenany, matetika ireo ao anatin'ity sokajy ity dia heverina ho solosaina mora na antonony.
Ireo solosaina finday ireo dia manana habe amin'ny efijery manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 santimetatra ary amin'ny ankapobeny dia tsy manana endri-javatra be loatra izay mipetaka eo ambanin'ny casing plastika mahazatra. Solosaina izy ireo afaka manao asa andavanandro fa lavo izy ireo rehefa mila zavatra sarotra kokoa ianao. mino izany aho ity sary ity Hanampy anao kely izany hahita ny zava-drehetra amin'ny sary.
Tamin'ny taona 2014 ny MacBook Pro 13-inch dia azo inoana fa ny solosaina finday tsara indrindra navoakan'i Apple hatramin'izay. Ny modely 2021 dia somary haingana kokoa ary manome fiainana bateria lava kokoa. Ankoatra ny fanavaozana anatiny, ny MacBook Pro 2021 13-inch dia nandova ny trackpad Force Touch vao haingana. Angamba tsy miavaka amin'ny rindranasa ara-barotra i Apple, fa ny fahazoana Mac dia tena mahasarika raha toa ka dinihinao ny rindrambaiko atolony sy ny fanavaozana azy.
Chromebook dia iray amin'ireo solosaina finday kely sy maivana indrindra eny an-tsenaSaingy tsy manana ny hery sy ny fitahirizana ny kahie mahazatra izy ireo. Raha tokony ho rafitra fiasana Windows na Macintosh, ny Chromebook dia mandeha amin'ny Chrome OS an'ny Google, natao manokana hijerena Internet sy zavatra hafa. Amin'ny ankapobeny dia kely dia kely ny kapila mafy ataon'izy ireo - manodidina ny 16GB - ny efijery dia matetika 11 santimetatra, ary matetika dia manana seranan-tsambo USB iray ihany izy ireo.
Manana fanadihadiana fampitahana feno momba ny Chromebooks ho solosaina finday kely tsara indrindra.
Na izany aza, mamela anao hitahiry sary, horonan-tsary ary antontan-taratasy hafa ao amin'ny Google Drive izy ireo fa tsy amin'ny kapila mafy.. Ny famahana ny efijery dia matetika 1366 x 768 piksel, izay ampy hivezivezena amin'ny Internet sy hijerena sarimihetsika tsindraindray. Ankoatra izany, azonao atao ny mampifandray USB iray mba hampitomboana ny fifandraisana.
Ny vokatr'izany dia rafitra afaka mandeha amin'ny fitaovana faran'izay ambany, manao Chromebook mety tsara ho an'ny tetibola tery na ho an'ny mpianatra. Mazava ho azy fa ny Chromebooks dia miasa tsara indrindra any amin'ny faritra misy fidirana aterineto tsy misy tariby, fa Google dia nampitombo be ny fampiasany ivelan'ny aterineto tato ho ato. Raha te hahalala ny momba azy ireo ianao dia afaka mijery ny Dell Chromebook 11 na ny Toshiba Chromebook.
Ny netbook dia mitovy amin'ny Chromebook satria tena kely izy ireo, tsy lafo ary natao ho an'ny fitetezana tranonkala sy zavatra hafa. Ireo solosaina kahie ireo dia tsy manana kapila optika hilalao DVD sy CD. Na izany aza, Tsy toy ny Chromebooks, ny netbook dia matetika mandeha amin'ny rafitra fiasana Windows, koa ny farany na taloha, izay fantatry ny ankamaroan'ny mpampiasa.
Azonao atao ny manindry eto raha hijery ny netbook mora indrindra.
Fanampin'izay, netbooks maro, miaraka amin'ny efijerin'ny fikasihana sy ny klavier azo esorina, no eo amin'ny sisin-tany eo anelanelan'ny solosaina finday sy takelaka. Ny netbook dia solosaina finday tsara ho an'ireo izay tia mampiasa rindranasa hilalao lalao, fa aleony mitendry amin'ny fitendry ara-batana.
Aleo kely sa lehibe?
Na inona na inona sokajy misy azy, solosaina finday Matetika izy ireo dia 11-17 santimetatra ny habeny. Ny fanapahan-kevitrao momba ny haben'ny solosaina findainy dia tokony hiorina amin'ireto anton-javatra roa ireto: ny lanjany sy ny haben'ny efijery.
Voalohany indrindra, ny haben'ny efijerin'ny solosainao dia midika mivantana ny habetsahan'ny atiny asehony sy ny habeny, mazava ho azy. Na izany aza, tokony ho tsaroanao koa fa, Rehefa mitombo ny haben'ny efijery dia tokony hitombo koa ny famaha. Tsy tokony hanaiky na inona na inona latsaky ny fanapahan-kevitra 1366 x 768 ho an'ny solosaina finday 10 ka hatramin'ny 13 santimetatra ianao, na 1920 x 1080 ho an'ny solosaina finday 17 hatramin'ny 18 santimetatra.
Faharoa, tokony hotadidinao izany Isaky ny santimetatra amin'ny efijery ampitomboinao dia hitombo 0.45 kilao eo ho eo ny lanjan'ny solosaina finday. Mazava ho azy, misy maningana, misy modely maivana sy manify izay manapaka io fironana io. Angamba tianao ny efijery maranitra sy lehibe indrindra eny an-tsena, saingy vonona ve ianao hitondra izany ao anaty kitaponao?
Inona no endri-javatra tokony hotadiavinao?
Tahaka ny amin'ny ankamaroan'ny gadget teknolojia, ny solosaina finday matetika dia misy endri-javatra maromaro izay mety ilainao na tsy ilaina amin'ny alàlan'ny default. Ireo endri-javatra voatanisa etsy ambany dia ny tsy maintsy anananao, ireo tokony hotadiavinao rehefa mividy ny solosaina findainao.
USB 3.0- Ity no fenitra farany amin'ny teknolojia famindrana data USB. Ataovy azo antoka fa manana iray amin'ireo seranana ireo ny solosainao, mba hahatonga ny fifindrana rakitra eo anelanelan'ny solosainao sy, ohatra, ny USB 3.0 flash drive dia haingana kokoa.
802.11ac Wi-Fi- Hatramin'izao dia 802.11n no fifandraisana Internet tsy misy tariby haingana indrindra, saingy tamin'ny taon-dasa dia niseho ny router 802.11ac. Raha mikasa ny hampiasa ny solosaina findainao ianao hijerena horonan-tsary mivantana na hisintona rakitra sy votoaty marobe, dia tokony handinika tsara ny fisafidianana modely misy an'io karazana fifandraisana Wi-Fi io ianao.
Mpamaky karatra SD- Miaraka amin'ny lazan'ny fakan-tsary Smartphone amin'ny fakana sary, mpanamboatra solosaina finday maro no nanomboka nanala an'io endri-javatra io tamin'ny maodely, na izany aza, raha mpankafy sary ianao dia mety tsy hahita mpamaky karatra SD.
Hikasoka ny efijeryNa dia mampametra-panontaniana aza ny fahamendrehan'ny ecran touche amin'ny solosaina finday amin'izao fotoana izao, tsy fantatsika izay ho avy. Na izany aza, dia endri-javatra iray izay mety hahatonga ny kitapo ho lafo kokoa, koa manombana tsara raha ilaina alohan'ny hanapahana hevitra.
Fanontaniana apetraka amin'ny tenanao alohan'ny hividianana
Alohan'ny hivoahana hividy ny solosaina finday tsara indrindra dia tokony hanontany tena ireto fanontaniana manaraka ireto ianao. Izy ireo dia hanampy anao hanapa-kevitra izay karazana solosaina finday no tsara indrindra ho anao.
Inona no tena hampiasanao ny solosaina finday?
Raha hampiasa azy io amin'ny ankapobeny ianao mba hivezivezena amin'ny Internet, hijery horonan-tsary mivantana ary hanao antso an-tsary miaraka amin'ny fianakaviana tsindraindray, dia azo antoka fa ho ampy ny solosaina ho an'ny fampiasana ankapobeny na ara-toekarena. Tia milalao ianao? Ao aminao ny valiny. Mihetsiketsika be ianao ary mila solosaina finday manify sy maivana, manandrama Ultrabook. Ny famaliana an'io fanontaniana io dia hitarika anao amin'ny lalana marina foana.
Ohatrinona ny fiheveranao ny famolavolana?
Misy solosaina finday isan-karazany, marika, modely sy habe - tsy lazaina intsony ny sosona loko na fitaovana. Raha maneso ny endrika ratsy amin'ny solosaina findainao hitanao manodidina anao ianao, dia mety mila solosaina misy vata aluminium fotsiny ianao, na farafaharatsiny plastika malefaka. Tandremo anefa fa lafo matetika ny endrika.
Ohatrinona ianao na vonona ny handany?
Amin'ny farany, ity no tokony ho barometera lehibe indrindra rehefa manapa-kevitra hoe inona ny solosaina findainao hovidiana, tsy tokony handany mihoatra noho izay azonao atao mihitsy ianao. Ny teti-bolanao no hibaiko ny sokajin'ny solosaina findainao.
Mitady solosaina finday mora vidy? Lazao anay ny vola tianao holaniana
Inona no nanome lanja antsika?
Mety tsy ho tonga saina ianao, fa ny solosaina finday dia niaraka taminay nandritra ny 30 taona mahery, na dia tamin'ny andro voalohany aza dia tsy dia nisy loatra ny milina fanoratana. Nandritra ny am-polony taona maro, ny solosaina desktop nentim-paharazana dia nanome hery informatika bebe kokoa, fahafaha-mitahiry bebe kokoa, ary fanaraha-maso tsara kokoa amin'ny vidiny mora kokoa. Teo antenatenan'ireo taona XNUMX, dia ara-dalàna ny nanana solosaina desktop, saingy nanomboka nahita ny tombontsoa azo tamin'ny fananana solosaina finday ny fianakaviana sasany.
Rehefa nandeha ny fotoana, ny Internet dia nivoatra avy amin'ny modem dial-up mankany amin'ny router tsy misy tariby izay ananantsika amin'izao fotoana izao ary, mifanitsy amin'izany, Ny solosaina finday dia nihatsara mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpampiasa izay mila mihetsika miaraka amin'ny solosainy. Raha vao gadget ho an'ny mpandraharaha, ny banky ary ny miaramila, ankehitriny dia lasa fitaovana tena ilaina ho an'ny rehetra.
Satria ny portability no tena sandan'ny solosaina finday, rehefa manombatombana izay solosaina hovidina ianao dia tokony handinika tsara ny habeny sy ny lanjany., tsy manadino ny processeur sy ny fitadidiany. Na dia tsy milanja mihoatra ny 9 kilao toy ny taloha intsony aza ny solosaina finday maoderina, dia mbola hitanao ny fahasamihafana misy eo amin'ny maodely 2.72 kg sy ny 1.84. Raha mpianatra ianao ary mikasa ny hitondra ny solosainao any am-pianarana, dia tsy maintsy mitondra azy ao anaty kitapo na kitapo ianao ary azo antoka fa hankasitrahanao fa modely kely sy maivana kokoa izy io. Saingy, amin'ny lafiny iray, raha injeniera fanamafisam-peo ianao ary mirakitra fampisehoana mivantana an'ny tarika mozika, ny zavatra hanontanianao ny solosainao dia ny ho mahery araka izay azo atao.
Misy karazany maro ny solosaina finday. Afaka mandany euros an-jatony vitsivitsy ianao amin'ny solosaina finday fototra na an'arivony maro amin'ny solosaina finday avo lenta. Miaraka amin'ny sasany dia afaka mivezivezy amin'ny Internet sy manoratra mailaka fotsiny ianao, fa ny hafa kosa afaka mampandeha programa fanitsiana horonan-tsary sy sary tsy misy olana. Ny karazana solosaina finday nofidinao dia tokony hifanaraka amin'ny asa kasainao hatao aminy. Mila izany ve ianao mba hiasa? Te hijery sarimihetsika na fandaharana amin'ny fahitalavitra tianao indrindra ve ianao? Olona mamorona ve ianao sa tia lalao video? Amin'ity fampitahana solosaina finday ity dia nanombana ireo modely tsara indrindra eny an-tsena izahay. Raha te hiditra lalindalina kokoa ianao dia afaka mamaky ny lahatsoratray amin'ny solosaina finday.
Inona no laptop tsara indrindra amin'ity fampitahana ity?
Ny valin'io fanontaniana io dia tsy tsotra ary tsy misy ifandraisany amin'ny solosaina finday napetrakay teo amin'ny latabatray. Ny solosaina finday tsara indrindra dia ilay mahafeno ny filanao tadiavinao ary tsy mila mifanandrify amin'ny an'ny olon-kafa.
Na dia mety mitady ny solosaina finday maivana indrindra eny an-tsena ianao mba handehanana miaraka aminy na aiza na aiza, ny mpampiasa iray hafa dia mety mitady ny mifanohitra amin'izany.
Noho izany antony izany, tamin'ny fampitahana solosaina finday dia nanandrana nanome izay ilain'ny mpihaino rehetra izahay, miloka amin'ny modely tsara indrindra amin'ny fizarana tsirairay mifandraika amin'ny vidiny kalitao.
Raha tsy fantatrao izay solosaina hovidina dia mametraha hevitra ary hanampy anao hisafidy izay mifanaraka amin'ny filanao izahay.
Ny solosaina finday tsara indrindra ho anao dia hiankina tanteraka amin'izay ilainao, amin'izay hampiasainao azy. Noho izany antony izany, ny lisitra dia manafatra amin'ny vidiny fa tsy amin'ny "kalitao".
Raha mitady solosaina findainao hampiasaina tsindraindray ianao (toy ny mijery ny mailakao, mijery ny tranonkala, manavao ny tambajotra sosialy, manova sary, mijery Netflix na manao ny asanao amin'ny Microsoft Office na Google Docs, aza manahy amin'ny Chromebooks. ), Tena manoro hevitra anao aho mba handinika Chromebook. Jereo ireo eo ambony amin'ity torolàlana ity. Raha toa ka manizingizina ny hividy solosaina finday Windows ianao, na mila zavatra mahery vaika kokoa, dia azonao atao ny misafidy ny iray amin'ireo solosaina izay natolotsika tany am-piandohana.
Ho hitanao ato amin'ity lahatsoratra ity ihany koa ireo izay manana sanda tsara indrindra amin'ny vola. Ary koa raha mijery manodidina ny tranokala kely ianao amin'ny fampiasana ny menu navigateur sy ny hafa dia ho hitanao fa manana fampitahana sy lahatsoratra manokana kokoa isika arakaraka ny karazana solosaina tianao hovidiana. Azonao atao ny mijery ny solosaina finday tsara indrindra (ho an'ny gaming), na ny solosaina finday tsara indrindra ho an'ny asa, sns.
Araka ny hitanao avy amin'ny lisitra dia hazava aminao tanteraka aho. Ny solosaina finday rehetra ho hitanao eto ambany dia solosaina Windows. Ary raha ny marina, nampiako ireo maodely Windows izay tsy tiako indrindra. Tsy hoe ratsy ny solosaina finday Windows, fa matetika aho no mampiasa Chromebook azo ampiasaina amin'ny asa mitovy ary amin'ny ankapobeny dia mora kokoa (araka ny hitanao). Tsy lazaina intsony fa tsy manana toerana ao amin'ity torolàlana ity ny Apple Macbooks 🙂
1 Solosaina mora indrindra
1.1 Fifanarahana anio amin'ny solosaina finday mora
1.2.1 Solosaina araka ny vidiny
1.2.2 Laptops amin'ny processeur
1.2.3 Solosaina amin'ny karazana
1.2.4 Solosaina amin'ny marika
1.2.5 Laptops araka ny efijery
1.2.6 Solosaina araka ny fampiasana tianao homena azy
1.3 Ny solosaina finday mora indrindra amin'ny 2021
1.4 Ny solosaina finday mora indrindra araka ny fampiasany
1.5 Tolo-kevitra alohan'ny hividianana
1.6 Fampitahana solosaina finday: vokatra farany
1.7 Karazana solosaina finday
1.7.2 Solosaina ho an'ny lalao
1.7.3 Solosaina ho an'ny mpianatra sy ny asa
1.7.5 Solosaina roa amin'ny iray (hybrids)
1.7.6 Solosaina finday gaming
1.7.7 Solosaina amin'ny tanjona ankapobeny
1.8 Aleo kely sa lehibe?
1.9 Inona no endri-javatra tokony hotadiavinao?
1.10 Fanontaniana apetraka amin'ny tenanao alohan'ny hividianana
1.10.1 Inona no tena hampiasanao ny solosaina finday?
1.10.2 Ohatrinona ny fiheveranao ny famolavolana?
1.10.3 Ohatrinona ianao na vonona ny handany?
1.11 Inona no nanome lanja antsika?
1.12 Inona no laptop tsara indrindra amin'ity fampitahana ity?
1.13 Famaranana farany
Solosaina Black Friday
Solosaina Cyber ​​Monday